Ushukela wegazi ojwayelekile > Ukuxilonga
Ushukela wegazi ojwayelekile
I-Glycemia ilawulwa izinqubo eziningana zomzimba. Amazinga we-glucose aguqukela emazingeni aphezulu ngemuva kokungenwa, ngenxa yokufakwa esiswini kwamathumbuboyamu (isisindo esincane samangqamuzana) kusuka ekudleni noma ngokunqamuka kokunye ukudla, njengama-starches (polysaccharides). Izinga le-glucose lehla ngenxa ye-catabolism, ikakhulukazi ngamazinga okushisa akhuphukayo, ngokuzivocavoca ngokomzimba, ukucindezela.
Ezinye izindlela zokulawula i-glycemia yi-gluconeogenesis ne-glycogenolysis. I-Gluconeogenesis inqubo yokwakheka kwama-molecule we-glucose esibindini futhi ngokwengxenye yethoni ye-cortical yezinso kusuka kumamolekyuli wezinye izinto ezihlanganisiwe, ngokwesibonelo, ama-amino acid wamahhala, i-lactic acid, i-glycerol. Ngesikhathi se-glycogenolysis, i-glycogen enqwabelene yesibindi nemisipha yamathambo iguqulwa ibe ushukela ngamaketanga amaningana we-metabolic.
Ushukela omningi uguqulwa ube yi-glycogen noma i-triglycerides yokugcina amandla. I-glucose ingumthombo obaluleke kakhulu wamandla we-metabolic wamaseli amaningi, ikakhulukazi amaseli athile (ngokwesibonelo, ama-neurons namaseli abomvu egazi), acishe ancike ngokuphelele emazingeni kashukela. Ingqondo idinga i-glycemia ezinze kahle ukuze isebenze. Ukugcotshwa kweglue glucose engaphansi kwama-3 mmol / L noma ngaphezulu kwama-30 mmol / L kungaholela ekungazini, ekubanjweni nasekuhlungweni komzimba.
Ama-hormone amaningana abandakanyeka ekulawulweni kwe-glucose metabolism, njenge-insulin, i-glucagon (etholwa ngamanyikwe), i-adrenaline (ekhishwa yizindlala ze-adrenal), ama-glucocorticoids nama-hormone e-steroid (atholwe yi-gonads kanye ne-adrenal gland).
Ekusebenzeni kwemitholampilo, kunezindlela ezi-2 zokuthola i-glycemia:
i-glycemia esheshayo - ukugxila kwe-glucose okulinganiselwe ngemuva kwamahora we-8 wokuzila
isivivinyo sokubekezelela i-glucose - ukukalwa okuphindwe kathathu kokugxilwa kweglucose nethuba lemizuzu engama-30 ngemuva komthwalo we-carbohydrate.
Kwezinye izimo, kubhekelwa ukuqapha i-glucose egazini, okuvame ukwenziwa isiguli ngokwayo sisebenzisa i-glucometer ephathekayo.
Ezimweni eziningi zezifo kanye nezimo ezithile, ukugcwala kweglucose egazini kungakhuphuka (isifo sikashukela) - lesi simo sibizwa ngokuthi yi-hyperglycemia, noma sinciphise (umthamo okhethiwe we-insulin ku-mellitus yesifo sikashukela, ukudla okuqinile, ukuzikhandla okukhulu ngokomzimba) - lokhu kubizwa ngokuthi yi-hypoglycemia.